Ciyaarta loo yaqaan "Khiyaano ama Jidadku" way soo noqdeen! Waa tan sida aad uga qayb qaadan karto sanadkan - SDOT Blog
Ciyaarta loo yaqaan “Khiyaano ama Jidadku” way soo noqdeen! Waa tan sida aad uga qayb qaadan karto sanadkan
Wacitaanka dhamaan bahalada, iyo noolaha kale ee cabsida leh – barnaamijkeenii khiyaano ama jidadka ayaa soo noqday!
Khiyaano ama Jidadku waa fursad aad ku xirato jidkaaga inta badan taraafikada baabuurta ee xaflada xanibaada ee Haalowiinka-ka-fikir dharka, cuntada fudud, iyo madadaalada xaafada!
Waxa kale oo aad marti qaadi kartaa bandhigga Día de Muertos ofrenda iyo dabaaldegga dadka aad jeceshahay ee aan hada nala joogin
Akhri si aad u barato sida loo sameeyo khiyaano ama jidadka adiga oo leh ogolaansho bilaash ah oo fudud. (Waxaan kugula talineynaa inaad gudbiso dalabkaaga ogolaanshaha bilaashka ah Oktoobar 15 si loo hubiyo laakiin weli waxaan aqbali doonnaa ogolaanshaha intaas ka dib)
Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno Khiyaano ama Wadooyinku waxay soo noqdeen 2021! Waxaad codsan kartaa ogolaansho Khiyaano ama Street oo bilaash ah oo loogu talagalay Haalowiinka! Waxaan sidoo kale ku dhiirigelineynaa bulshada Laatiin (e/o/a/x) inay codsadaan oo u dabaaldegaan Maalinta Dhimashada (Día de Muertos)!
Waxaan ku dhiirigelineynaa qof kasta oo danaynaya inuu codsado oo ku xiro wadadaada baabuurta inta lagu jiro usbuuca Halowiinka iyo Día de Muertos xafladaha khiyaanada-ama-daaweynta iyo xafladaha dhismaha bulshada!
Khiyaano ama Wadooyinku waxay ka mid ahaayeen barnaamijyadeena xiritaanka wadooyinka ee ugu caansan laga bilaabo 2020 waana ku faraxsanahay inaan dib u soo celino sanadkan. Tilmaamo gaar ah oo loogu talagalay Khiyaaano-ama-wadooyinka-xiritaanka waddadaadu waxay socon kartaa ilaa 10-ka fiidnimo!
Diyaar ma u tahay inaad dalbato? Raac tilmaamaha iyo tilmaamaha u -qalmitaanka boggayaga Play Street & Block Party. Goobta “Project Name” Fadlan geli: “Trick or Street,” ama “Day of the Dead” si aan awoodno inaan mudnaanta u siino dib -u -eegista codsigaaga. Hadii aad u baahan tahay caawimaad dhamaystirka codsigaaga, naga soo wac 206-684-7623 si aad u bilowdo. Turjubaanku waa bilaash!
Hadii aad ku nooshahay jidka Daryeel Joogto ah, martigelinta munaasabad ayaa xitaa ka sahlan maadaama wadadaadu ay hore u lahayd xanibaadyo iyo calaamadihii “JIDKA XIRAN”. Uma baahnid ogolaansho dheeri ah si ay u hagto khiyaano ama wadooyinka ee Jid Joogta Caafimaadka ku sugnow! Waxaad weli u baahan doontaa inaad raacdo tilmaamaha, waxaadna soo saari kartaa calaamado dheeraad ah si aad dadka baabuurka u wado u ogaato hawlahaaga qorshaysan:
Waraaqda ku ciyaa Jidadka Cafimaad ku sugnow (June 2021)
Waraaqada Ku ciyaar Jidadka Caafimaadka ku sugnow (Juun 2021)
Waa kuwan waxqabadyada dayrta si aad u bilowdo!
Bandhigga Dharka Halloween
Xiro dharka Halowiinka ee aad jeceshahay oo ku soco hareerahaaga si aad u eegto qurxinta Halowiinka oo aad ugu raaxaysato cimilada dayrta. Xusuusnow in wadooyinku ay weli u furan yihiin gaadiidleyda maxaliga ah – fadlan hubso inaad la wadaagto wadada dadka baaskiilka wata, socda, rogaya oo u kaxeynaya meelaha maxaliga ah ee aaga, sida deriska kale ee u baahan inay galaan guryahooda ama meheradooda
Ka-qaybgalayaasha waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay xirtaan maaskaro oo ay ilaaliyaan fogeynta bulshada 6-lugood hadii aad la joogto dad kale ama dad badan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa tilmaamaha caafimaadka dadweynaha ee ugu dambeeyay COVID-19 ee Caafimaadka Dadweynaha-websaydhka Seattle & King County. Waad ku mahadsan tahay sidaad qaybtaada uga caawisay hubinta caafimaadka iyo badbaadada bulshada inta aad ka qaybqaadanayso madadaalo, xafladaha ee agagaarka Halowiinka iyo Día de Muertos.
Día de Muertos ofrenda bandhig iyo dabaaldeg
Ku marti geli meelo alabari oo kala duwan oo ku soo bandhig barxada hore ama daaqadaha waaweyn oo ku soco hareerahaaga si aad u xasuusato dadka aad jeceshahay oo aad ugu raaxaysato cimilada dayrta.
Mar labaad, fadlan xusuusnow wadooyinku weli way u furan yihiin gaadiidka maxalliga ah!
Talooyinka Filimka Halowiinka ee SDOT
Hadii aad rabto inaad gudaha joogto, fiiri liistadayada filimada hoosta. Filimadaan ayaa ah kuwa ay jecel yihiin qaar ka mid ah shaqaalaha SDOT dhamaantoodna kuma haboona kooxaha yaryar. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad baaritaan samayso oo aad adigu go’aansato naftaada ama qoyskaaga haddii kuwani ay ku habboon yihiin adiga iyo qoyskaaga/saaxiibadaada!
Filinka Saaxiibtinimo Qoys (Family Friends) Filinka loo yaqaan Cabsi
Filinka Hocus Pocus
Filinka Guriga Bahalka (Monster House)
Filinka Qoyska Addams (Adams Family)
Filinka Qarowga Ka Hor Christmas (The Nightmare before Christamas)
Filinka Edward Scissorhands
Filinka Bahal Inc
Filinka Ghostbusters -ka
Filinka Sariirta hoosteeda ha eegin
Filinka Guriga Cabsida ah
Filinka Alvin iyo Chipmunks waxay la kulmeen Wolfman
Filinka Hotel Transylvania
Filinka ParaNorman Filinka The Conjuring
Filinka Ilmaha Rosemary
Filinka Diyaar ma tahay ama ma
Filinka Riyo Riyo Ah Wadada Elm
Filinka Iftiinkii (The Shining)
Filinka Cabsida Wadada Saddexaad (The Fear Street Trilogy)
Filinka Waxqabadka Paranormal
Filinka Get Out
Filinka A Quiet Place II
Filinka The Babadook
Filinka The Haunting of Hill House
Filinka Guriga (1977)
Filinka Ha Neefsan
Fadlan ogow: Waxaan codsanaynaa in codsiyada la soo gudbiyo 5ta galabnimo ee Jimcaha, Oktoobar 15 si loo hubiyo dib -u -eegis habboon iyo oggolaansho. Hadii aad qabto wax caqabado ah marka aad la kulmeyso waqtigan kama dambaysta ah, fadlan nagala soo xiriir kaalmo farsamo publicspace@seattle.gov.
Ma ku raaxaysatay dabbaaldegga Trick or streets? Waxaan jeclaan lahayn inaan ogaano! Noogu soo dir emayl publicspace@seattle.gov si aad noo ogeysiiso waxa si fiican u dhacay, iyo wax kasta oo aad jeclaan lahayd inaan ogaano. Xor ayaad u tahay inaad ku darto sawirada dhacdadaada Khiyaano ama Waddooyinka, sidoo kale!
Madadaalada mid dhamaanaysa ma aha maadama ay Haalowiin iyo Día de Muertos way dhamaadeen! Ogolaanshaha Play Street iyo Block Party waxaa heli kara shaqsiyaadka, kuwa aan macaash doonka ahayn, iyo ururada bulshada sanadka oo dhan!
Farqiga u dhexeeya Haalowiinka iyo Día de Muertos:
Hola Qof walba! Día de Muertos wuxuu ka yimid Mesoamerica qadiimiga ah (Meksiko iyo waqooyiga Bartamaha Ameerika) halkaas oo kooxaha asaliga ah, oo ay ku jiraan Aztec, Maya iyo Toltec, ay lahaayeen waqtiyo gaar ah markay xusayaan kuwii ay jeclaayeen ee dhintay.
Bilaha qaarkood ayaa loo qoondeeyay in la xusuusto qofka dhintay, iyadoo lagu salaynayo in qofka dhintay uu ahaa qof weyn ama ilmo. Ka dib imaatinkii Isbaanishka, caadadan xuska kuwii dhintay waxay isku xirtay laba fasax oo Isbaanish ah oo Kaatoolig ah: Dhammaan Saints Day (Nov. 1) iyo Dhammaan Maalinta Nafta (Nov. 2).
Día de Muertos waxaa inta badan loo dabaaldegaa 1 -da bisha Nofembar si loo xusuusto carruurta dhimatay, iyo 2 -da Noofembar si loo maamuuso dadka waaweyn. Maanta, Día de Muertos waxaa inta badan lagu xusaa Mexico iyo qaybo ka mid ah Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Dhowaan waxay caan ku noqotay bulshooyinka Latino ee dibedda ku nool, oo ay ku jirto Mareykanka. Día de Muertos maahan maalin baroordiiq. Qoysasku waxay u dabbaaldegaan iyagoo u soo bandhigaya qurbaan cunto, miro, iyo waxyaabo kale oo qofkii tagay ka helay markii ay noolaayeen. Sidoo kale, muusiga iyo qurxinta midabada leh ee la dul dhigay hadiyada ayaa soo dhaweynaya ruuxa dhintay.
Waxaad ku biiri kartaa Bandhig Faneedka Dia de Muertos Seattle iyada oo loo marayo mareegaha Xarunta Seattle Oktoobar 31 ama booqo Altares shaqsi ahaan Fisher Pavilion Oktoobar 30 ilaa Nofeembar 7, 11 subaxnimo-6 galabnimo maalin walba.
Disney Pixar waxay qabatay shaqo aad u qurux badan oo ku qabsatay nuxurka fasaxa filimkoodii 2017 “Coco”.
SDOT Latinx Caucus
Filed Under: Events Tagged With: Trick or Streets